राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बन्दै रक्षामन्त्रीका सम्धी पटक-पटक विवादित डा. कोइराला ! – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बन्दै रक्षामन्त्रीका सम्धी पटक-पटक विवादित डा. कोइराला !
१० भाद्र, २०७७ ०६:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं – देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला नियुक्त हुने भएका छन् । कोइराला उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी अर्थात् छोराका ससुरा हुन् ।
कोइरालाको यसअघिका नियुक्ति र उनका कामहरु पनि विवादित छन् । उनको नियुक्ति पाउने क्रम २०५१ सालबाटै सुरु भएको हो । तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकार हुँदा २०५१ सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रवन्ध नियुक्त भए । खाद्य संस्थान पछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्ति पाए ।
त्यसपछि पनि उनी खाली बस्नु परेन । एमालेको सरकार बन्ने वित्तिकै उनले नियुक्ति पाइहाल्थे । पोखरेल वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री बनेका बेला कोइराला नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
२०६२/६३ पछि कोइराला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला गुणस्तरहीन उत्तर पुस्तिका खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।